Daahan Production Line, System Automatic, Powder daahan - Liush
Integration Robot Warshadaha
System Logistics Intelligent
Naqshadaynta & Solutions
Debugging & Tababarka
Dayactirka & Dayactirka
Solutions for baahi kasta
kala duwan oo codsi balaaran
Stability, sax iyo nolol dheer
Waqtiyeysan oo hufan ka dib iibka adeegga
Liush, la aasaasay 1995, waa horseedka Bixiyaha Chinese Robot is Integration ah taas oo uu leeyahay saddex iibka iyo xarumaha R & D iyo laba warshadood oo soo saarka ee Shenzhen, Suzhou iyo Anqing. Waxaan leenahay in ka badan 700 oo qof, kuwaas oo tirada R & D shaqaalaha ku dhawaad ​​gaaraan si 100. Waxaan hantidaan dhirta oo dabooli 50000 mitir oo laba jibbaaran oo waxay leeyihiin oo dhan cayn kasta oo ah qalabka processing xirfadeed. Liush Group ayaa ku hawlan Automatic daahan Production Lines muddo 25 sano ah oo u ururay waayo-aragnimo qani ah ee horumarinta barnaamijyada robot, naqshadaynta technology qalabaynta iyo robot dhafan naqshadaynta. ganacsiyada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah line-soo-saarka daahan, isdhexgalka robot warshadaha, bakhaar auto-stereoscopic iyo wixii la mid ah. Waxaan nahay koox khibrad leh technology sare, si aan awood u siinaya macaamiisha adeegyo kala duwan oo dhamaystiran.
Electrophoretic daahan Line
Daahan Production Line (Powder, Rinjiga ama Glaze)
line-soo-saarka waxay ka dhigi kartaa tiro balaadhan oo ah workpieces ama waxyaabaha dahaarka leh daahan difaaca kala duwan ama midabada kala duwan by hababka kala duwan.
Nidaamka sort ku caawin kartaa oo ku kaydiso si fiican oo ku filan si ay u daboolaan baahida deg deg ah iyo joogto ah macaamiisha bixinta.
line-soo-saarka kartoo caawin kara hagaajiyo tayada wax soo saarka iyo kordhiyo dhalid.
Ka go'an inay daboolaan baahida
Hel Quote A Hadda
Waayo, Technology ama ka dib iibka
Rinjiyeynta , is , Fanuc Robot , isdhexgalka , System Automatic , Logistics ,